Dare reConCourt Rinorasa Chikumbiro cheMisa Zimbabwe
Nyamavhuvhu 21, 2018
Justice Luke Malaba outside the Bulawayo High Court on Monday.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rarasa chikumbiro chesangano reMisa Zimbabwe chekuti vatori venhau vapihwe mukana wekutora mifananidzo yemavhidhiyo pachange pachinzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiri weMDC Alliance VaNelson Chamisa.
VaChamisa vari kuda kuti zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa30 Chikunguru zvisendekwe parutivi, vachiti ivo ndivi vakakunda musarudzo iyi, kwete zvakataurwa neZimbabwe Electoral Commission, Zec, zvekuti mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa, ndivo vakakunda.
Vachisvitsa chikumbiro ichi mudare, gweta reMisa Zimbabwe, Amai Beatrice Mtetwa, vati vatori venhau vanobva kumakambani akasiyana-siyana vanofanirwa kubvumidzwa kutora mifanananidzo yemavhidhiyo mudare vagoibuditsa pamadandemutande nepazvivhitivhiti panguva imwecheteyo inenge ichiitika zvinhu kwete kuti komisheni inoona nezvematare yeJudical Services Commission ibvumidze kambani yeZBC yoga kuita izvi.
Amai Mtetwa vatiwo kambani yeZBC haifanirwe kuva iyo yoga inobvumidzwa kutora mifananidzo mudare mangwana sezvo mamwe makambani enhau akazvimrira akangofananawo neZBC ane marezenesi ekutepfenyura.
Vati zvakaitwa neJudicial Services Commission zvekupa ZBC chete mvumo yekutepfenyura zvichange zvichiitika mudare zvinoita sekuti kambani yeZBC yakakosha kupfuura mamwe makambani enhau uye vati zvichadhurira mamwe makambani enhau ari kuda kutepfenyura kunzwikwa kwenyaya ichange iri mudare mangwana sezvo kambani yeZBC yati ichange ichibhadharisa mari inoita zviuru gumi nezvitatu zvemadhora pazuva kumakambani achada kushandisa mifananidzo ichange ichitorwa nekambani iyi mudare mangwana.
Amai Mtetwa vaenderera mberi vachiti ZBC haibatike kune dzimwe nzvimbo munyika uye ruzhinji rwevanhu rwave kukwanisa kuona zvinenge zvichiitika munyika kubudikidza nekutepfenyurwa kunoitwa nevanoshandisa mbozhanhare vachiisa pamadandemutande panguva inenge ichiitika zvinhu.
Vatiwo zvakanaka kuti mamwe makambani akazvimirira abvumidzwe kutepfenyura ari padare riri kunzwikwa nyaya iyi mangwana sezvo achitepfenyurira vanhu vari muZimbabwe pamwe nevari kunze kwenyika vari kuda kuziva zvichange zvichiitika panyaya iyi mangwana.
Asi gweta ranga rakamirira VaMnangagwa, VaTinomudaishe Chinyoka, vati Misa Zimbabwe haina nhepfenyuro yainotepfenyura zvingapa kuti inzwikwe.
Gweta ranga rakamirira Judicial Services Commission, VaAddington Chinake, vatiwo mutori wenhau anoshanda akazvimirira, Busani Bafana, uyo anga achigitsigira chikumbiro cheMisa Zimbabwe ichi achiti anodawo kutora mifananidzo mudare, haana rezenesi rekutepfenyura nokudaro nyaya yake haina kusimba.
Magweta anga akamirira ZBC panyaya iyi atiwo ZBC inokwanisa kupa makambani ose mifananidzo yaanoda nemhando yaanenge achida zvisinei nekuti ndeemuno kana kuti ndeekunze sezvo achiti ZBC yave nemichina yechimanjemanje inokwanisa kuita izvi.
Mukuru wevatongi munyika, VaLuke Malaba, avo vanzwa nyaya iyi, varasa chikumbiro cheMisa Zimbabwe vachiti Misa Zimbabwe naBafana havana marezenesi ekutepfenyura saka nokudaro havana chavangarwira panyaya iyi.
VaChinyoka, vati vafara nemutongo waturwa nedare.
VaChinyoka vati zvasvitswa kudare neMisa Zimbabwe hazvina musoro.
Zvichakadai, kambani yeZBC yaswera ichiita gadziriro dzekuti igotepfenyura zvinenge zvichiitika mudare mangwana pachanzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare naVaChamisa yekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi sezvo vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro naVaMnangagwa nebato ravo reZanu PF.
Rimwe remagweta ari kumirira VaMnangagwa panyaya iyi, VaPaul Mangwana, vati vagadzirira zvizere kunzwikwa kwenyaya iyi vachiti vane tarisiro yekukunda panyaya iyi.
VaJacob Mafume, vanove gweta riri kumirira mumwe wevakakwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, VaNoah Manyika, avo vari kutsigira chikumbiro chaVaChamisa chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi, vaudzawo Studio7 kuti nyaya yavo iri pachena semhanza zvekuti dare harifanire kutora nguva richinzwa nyaya iyi.
Zvichakadai, munyori muJudicial Services Commission, VaWalter Chikwanha, vaudza Studio7 parunhare kuti vatongi vedare reConstitutional Court vachanzwa nyaya iyi neChitatu vachaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera.
Magweta aVaChamisa neaVaMnangagwa achange achisvitsa nyaya dzavo zviri pamutemo, ukuwo vatongi vedare iri vachivabvunzurudza.
Dare iri rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva gumi nemana kubva musi waziviswa nyika nezvesarudzo yemutungamiri wenyika.